एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार छिमेकी मुलुक भारत सन् २०२७ पछि विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक हुने उल्लेख गरिएको छ । आगामी ८ वर्ष भित्र भारत चीनलाई उछिन्दै २७३ मिलियन ...
प्रधानमन्त्रीको भाषाप्रति संघर्ष समितिको आपत्ति ! माइतीघरमा जनप्रदर्शन आज पनि
काठमाडौं । गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा व्यक्त गरेको भाषा अमर्यादित भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले जा...
चोभारमा एक सय टनको मञ्जुश्रीको ढुङ्गाको मूर्ति
ढुङ्गा कुँद्न शुरु गरेको आठ वर्षपछि चोभारमा ३३ फिट अग्लो मञ्जुश्रीको ढुङ्गे मूर्ति तयार भएको छ । वि.सं २०६८ देखि कलाकार चन्द्रश्याम डङ्गोलको नेतृत्वमा मञ्जुश्रीको मूर्ति बनाउने काम शुरु गरिएको थियो । ...
सेनाले गर्‍यो विस्फोटक पदार्थको परीक्षण
जंगी अड्डाले सुनाचुरीबाट उत्पादन हुने विस्फोटक पदार्थको गुणस्तर मापन गरेको छ । केही निजी कम्पनी र ठेकेदारले हेटौंडाको सुनाचुरी उद्योगबाट उत्पादित विस्फोटक पदार्थ कमसल भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अड्ड...
अब पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ, परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न
नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का प्राविधिकले मंगलबार पाइपमा पानी पठाएर गरेको परीक्षण पनि सफल भएको छ । आयल निगम रक्स...
उपत्यकामा दिउँसै गोली प्रहार गरी बँदेलको अवैध शिकार
ललितपुरको गोदावरी वनमा दिउँसै गोली प्रहार गरी बँदेलको अवैध शिकार भएको छ । गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित गोदावरी कुन्ड सामुदायिक वनमा भरुवा बन्दुक प्रहार गरेर बँदेल मारिएको हो । शिकारीको समुहले गत आइतबार ...
गैंडा मर्ने क्रम बढ्यो, के कारणले मरे भन्ने पत्ता लागेन
चालू वर्ष चोरी सिकारीबाट एउटा पनि गैंडा मरेका छैनन् । तर, प्राकृतिक कारणले ४३ वटा मरेका छन् । झन्डै एक वर्ष अवधिमा प्राकृतिक र अन्य कारणले ४५ गैंडा मरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागक...
काठमाडौं । संसदलाई सम्बोधन गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन । नौं दिने यूरोप भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्...
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्न नपाएको सन्दर्भमा सत्तारुढ पार्टी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभास चन्द्र नेम्वाङले मुख खोलेका छन । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसदम...
काठमाडौं । रोजगारीको सिलसिलामा तेस्रो मुलकमा रहेका ठकुरीहरु समाज सेवामा जुटेका छन । खाडी मुलुकमा बसेर भए पनि देशको मेरुदण्ड मानिने शिक्षाको घामबाट बाहीर रहेका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सहयोगमा ज...
एजेन्सी । चीनको सिचुआन प्रान्तमा गत सोमबार र आज(मंगलबार) बिहान आएको शक्तिशाली भूकम्पको दुई वटा झट्कामा एघार मानिसले जीवन गुमाएका छन् । भूकम्पमा एक सय बाइस घाइतेहरुको उद्दार गरिसकिएको छ भने अन्यको खोज...
इस्लामाबाद । पाकिस्तानको सेना र आईएसआईको आलोचना गरेको आरोपमा एक २२ वर्षे युवकको हत्या गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित मिडियाकर्मी मुहम्मद बिलाल खानको हत्या अज्ञात समुहले गरेको जनाइएको छ । पाकिस्ता...
प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्न पाएनन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकाे अवराेधकाे कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुने वित्तिकै प्रतिपक्षदलका सांसदले सभामुखसंग समय माग गरेका थिए । सभाम...
पछिल्लो समय सिंहदरबारमा वामहरुको रजगज चलेको छ । संविधानको सुन्दर पक्षलाई आत्मासाथ गर्दै लोकतान्त्रीक विधि स्वीकार गरेका वामहरु निर्वाचन मार्फत उक्त स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन । पुरानो संरचना नभत्काई न...
प्रतिपक्षीद्वारा संसदमा हंगामा, प्रत्यक्ष प्रसारण
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षदलले मंगलबारको बैठक अवरुद्ध गरिहेका छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदलाई सम्बोधन गर्न रोष्टम तर्फ अघि बढिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षदलले संसदीय मर्यादा कायम गर भन्द...
अबिरल वर्षासँगै आएको पहिरोले घर बगायो
संखुवासभा । गए राती देखी परेको अविरल वर्षाका कारण संखुवासभामा पहिरोले एक घर बगाएको छ । जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा वर्षा सँगै आएको पहिरोले अजित राईको घर बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोमा परेर मानवीय...
अमेरिका र इरानबीच भनाभनको अवस्था, अमेरिकाले खाडीमा थप एक हजार सेना पठाउने
वाशिङटन । अमेरिकाले इरानसँग तनाव बढ्दै गएपछि मध्य पश्चिमी क्षेत्र खाडीमा थप एक हजार सेना पठाउने भएको छ । सोबार कार्यवाहक अमेरिकी रक्षामन्त्री प्याट्रिक शनाहनले इरानको पछिल्लो व्यवहारका कारण अमेरिकी से...
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन आज, गुठी विधेयक देखि युरोप भ्रमणबारे बोल्ने
काठमाडौं । नौ दिने युरोप भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज(मंगलबार) प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि उठाइएका विभिन्न प्रश्नहरुको ...